အလင်း​ပျောက်​​သော အ​မှောင်​ကလူ – SilverCrane
HomeOur Blogအလင်း​ပျောက်​​သော အ​မှောင်​ကလူ
May 12, 2016	General Knowledge, News	0 Comments
“ဒီ​ကောင်​​လေးက သူ့အ​ဖေနဲ့အတူ ရေခူ​လုပ်​ငန်းလုပ်​ကိုင်​ရင်း ဂီရိမုန်​တိုင်းမှာ စီးပွားပျက်​သွားရှာတယ်​ ဒါ​ပေမယ့်​ ပြန်​ကြိုးစားလာတာ ၃နှစ်​အတွင်းအရမ်းချမ်းသာလာတာ မြင်​ပြီးဝမ်းသာမိတယ်​ကွာ”………
အိမ်​ခြံ​မြေကိုဝယ်​​ရောင်းလုပ်​ရင်း လူသိလာ​တော့ တချို့မိတ်​​ဆွေ​တွေကလည်း ခြံ​ရောင်း​ပေးဖို့အပ်​လာတာမျိုးရှိလာတဲ့အခါ ပွဲစားအမြင်​နဲ့မဟုတ်​ပဲ ​ရောင်းဝယ်​တစ်​​ယောက်​အ​နေနဲ့ မျှမျှတတနဲ့ ပွဲပြတ်​​အောင်​​ဆောင်​ရွက်​​ပေးခဲ့ပါတယ်​။
တချို့ကျ​တော့လည်း မာန​တွေကို​ရှေ့တန်းတင်​လို့ အတ္တလွန်​ကဲတဲ့စိတ်​​​တွေ​ကြောင့်​ ပွဲပျက်​ရတာ​တွေလည်း ကြုံခဲ့ရပါတယ်​။
တခါက ကျွန်​​တော်​နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ အန်​ကယ်​ ​ရှေ့​နေကြီး ဦး…….(ကွယ်​လွန်​)နဲ့အတူခြံအ​ရောင်းအဝယ်​တစ်​ခု
လုပ်​ဖြစ်​ကြပါတယ်​။ သူ့ရဲ့အမှုသည်​ဖြစ်​ဖူးတဲ့မိတ်​​ဆွေက စီးပွား​ရေး​လောကမှာ တရှိန်​ထိုး အောင်​မြင်​လာပြီးတဲ့​နောက်​ ကွန်​ဒို​တွေအများကြီးပိုင်​ဆိုင်​လာ​ပေမယ့်​ ခြံ​ကောင်း​ကောင်း​လေးတစ်​ကွက်​ လိုချင်​လို့ ရှာ​ပေးပါဆိုတာနဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းသွား​ဆေးတက္ကသိုလ်​​ရဲ့
နောက်​ကအိမ်​ယာတစ်​ခုမှာ ​ပေ၁၀၀ ပတ်​လည်​ခြံတစ်​ကွက်​ကိုလိုက်​ပြပါတယ်​။
ဝယ်​မယ့်​သူက ​ကျောက်​ဖြူ​ရေနက်​ ဆိပ်​ကမ်းမှာ ကယ်​ရီသ​င်္ဘော​တွေ ပိုင်​ဆိုင်​ထားပြီး တရုတ်​ရဲ့​ကျောက်​ဖြူ စီမံကိန်းမှာ အလုပ်​ဖြစ်​​နေသူဆို​တော့၊ အသက်​ကလည်း၃၀ဝန်းကျင်​ဆို​တော့ မာန်​ကလည်း​တော်​​တော်​တက်​တယ်​
​ပြောရမယ်​။ ကိုယ်​​ပြောတဲ့စကားကို ​သေချာ နားမ​ထောင်​ပဲဂရုမစိုက်​သလို စိတ်​မဝင်​စားသလိုအမူအရာနဲ့ဆက်​ဆံတယ်​။ ကိုယ်​ကလည်း အကျိုး​ဆောင်​သာလုပ်​​နေတာ ကိုယ်​ပိုင်​​မြေကွက်​နဲ့အိမ်​​တွေမနည်းဘူး
ဝယ်​ထားတာဆို​တော့ ကိုယ့်​မာနနဲ့ကိုယ်​ စကားအများကြီး မ​ပြောဘူး။ စထဲကယဉ်​သကိုယ်​ ဆိုပါ​တော့။
​ရောင်းမယ့်​​မြေကွက်​နဲ့အိမ်​က အရမ်း​ကောင်းတယ်​​ပြောရမယ်​ ဝယ်​မယ့်​သူက အိမ်​မြင်​တာနဲ့တန်းကြိုက်​သွားတာပဲ။
​ရေကူးကန်​ကို Water filter circulation systemနဲ့လုပ်​ထား​တော့ အမှိုက်​ဆိုတာမရှိဘူး။ ကားဂို​ဒေါင်​ နဲ့ခြံထဲမှာ​ဂေါက်​ကွင်းနဲ့ အိမ်​ရဲ့ကြမ်းခင်း​တွေကို
မာဘယ်​လ်​​ကျောက်​ပြား​တွေနဲ့ခင်းထားပြီး ပစ္စည်း​ကောင်း​တွေသုံးထားတာဆို​တော့ မကြိုက်​ပဲဘယ်​​နေပါ့မလဲ ။
သူ့မိန်းမကလည်း​ချော​ချော​လေး ၊သား​လေးတစ်​​ယောက်​ထဲနဲ့ဆို​တော့ ခြံကြီးက အပန်း​ဖြေလို့​ကောင်းမယ်​လို့ သူက​ပြောခဲ့တယ်​။
အဲဒါနဲ့​ပဲဈေးဆိုင်​ကြတာ​ပေါ့။ ရောင်း​ဈေးက သိန်း၅၅၀၀ ​ခေါ်ထားတယ်​။ ပွဲခကို၃ရာခိုင်နှုန်း​ပေးမယ်​။ ဝယ်​သူက​ဈေးဆစ်​တယ်​။ သူက ၉ဂဏန်းသမားမို့လို့ ​ဈေး​လျှော့​ပေးပါဆို​တော့ အဲဒါဆို သိန်း၅၄၀၀ ရမယ်​တဲ့။ ဝယ်​သူကလည်း သိန်း၄၅၀၀ ရရင်​ယူမယ်​။
လုံးဝမတိုး​ပေး​တော့ဘူးဆို​တော့ ရောင်းသူကလည်း ဗိုက်​နာ​နေတာနဲ့ အ​ရောင်းအဝယ်​ဖြစ်​ကြ​ရော​ပေါ့။ (​နောက်​မှသိတာက ​ရောင်းသူကဗိုက်​မနာပါဘူး ခြံ​ဈေး​တွေငြိမ်​လာတာနဲ့​ငွေ​ဖော်​ဖို့ပြင်​ဆင်​​နေတဲ့ တကယ့်​သူ​ဌေး​တွေပါ)
အ​ရောင်းအဝယ်​က ပစ်​စလတ်​ခတ်​နိုင်​တယ်​ ​ပြောရမယ်​။ ကားထဲကသိန်း၅၀သွားယူလာပြီး စရံချမယ်​ဗျာ စာရွက်​အလွတ်​မှာပဲ​ရေးလိုက်​ပါ အချိန်​မရလို့ ဆိုပြီး ၃လအတွင်း ပထမလမှာ သိန်း၅၀၀ ဒုတိယလမှာ သိန်း၁၀၀၀ တတိယလမှာ အ​ကျေ​ချေမယ်​
လို့​ရေးပြီးလက်​မှတ်​ထိုးကြတယ်​။ သိန်း၅၀တန်​တဲ့ စာရွက်​​လေးက သူတို့အတွက်​ဘာမှမဟုတ်​သလိုမျိုး၊ ကျွန်​​တော်​နဲ့​ရှေ့​နေကြီးကသာ မျက်​လုံး​တွေပြူးလို့​ပေါ့။ ရှေ့​နေကြီးက​တော့လမ်းမှာ ပြောလာ​သေးတယ်​။
ကိုစိုင်း​ရေ မင်းနဲ့အန်​ကယ်​က အလုပ်​​တော့ဖြစ်​သားကွတဲ့။ တကယ်​ရိုးသားပြီး အရမ်း​တော်​တဲ့​ရှေ့​နေကြီးပါ။
၂၀၀၈​လောက်​က​နေ ၂၀၁၃​လောက်​ အချိန်​ထိကအိမ်​ခြံ​မြေ​လောကရဲ့အထွဋ်​အထိပ်​အချိန်​ပဲ။ ​ငွေမည်း​တွေကို ​ငွေဖြူ​ဖော်​​နေကြတဲ့အချိန်​ ကိုယ်​​တွေက ​ငွေဖြူ​တွေရှာရင်း ​ငွေမည်း​တွေပိုက်​မိ​နေသလိုပါပဲ။ အခွန်​ဆိုတာ ကိုယ်​နဲ့မဆိုင်​သလိုပါပဲ။
​အေဂျင်​စီအလုပ်​ကလည်း စာရွက်​စာတမ်း အဆင့်​ဆင့်​​တွေနဲ့ လုပ်​ကိုင်​ရတာသိပ်​မရှိ​သေးချိန်​ဆို​တော့ အလုပ်​​တွေ​တော်​​တော်​ဖြစ်​ပါတယ်​။
ဒီလိုနဲ့ပထမလမှာ သိန်း၅၀၀ သွားယူ​တော့ ခြံရှင်​က မင်းပဲယူခဲ့ပါကွာဆိုတာနဲ့ သူတို့​နေတဲ့ ​အောင်​ဆန်းကွင်းနားက ကွန်​ဒိုကြီးမှာသွားယူရတယ်​။ အဲဒီကွန်​ဒိုကလည်း တိုက်​ခန်း​တွေကိုအရစ်​ကျနဲ့​ရောင်းပြီး နာမည်​ကြီး​နေတဲ့ကွန်​ဒို ။
လုံခြံ​ရေးစနစ်​က​တော့ ​ကောင်းတယ်​ဗျာ။ အဆင့်​ဆင့်​တက်​ရတာ။ အ​ပေါ်​ရောက်​​တော့ သူတို့အခန်းထဲဝင်​လိုက်​တာ အခန်းရဲ့​ဘေးနံရံနားမှာ ပီနမ်​အိတ်​​တွေနဲ့ အထုပ်​ကြီး​တွေတန်းစီပြီး ချထားတာအများကြီးပဲ။
သူက​တော့ခဏပဲစကား​ပြောနိုင်​တယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ သူကစင်္ကာပူမှာ Stock ကစားတယ်​။ ​ဒေါ်လာသန်းချီ စင်္ကာပူဘဏ်​ထဲမှာရှိတယ်​။ အင်​တာနက်​​တွေ လိုင်းမ​ကောင်း​သေးတဲ့ မှာအချိန်​ သူတို့ကွန်​ဒိုက လိုင်းအရမ်း​ကောင်းလို့ ​နေဖြစ်​တာဆိုပဲ။
အဲဒါနဲ့ သိန်း၅၀၀ကို ခုနက​တွေ့တဲ့ အထုပ်​ထဲကယူ​ပေးလိုက်​တယ်​​လေ။ ဟာ ဒီလူ​တော်​​တော်​ချမ်းသာတာပဲ စီးပွား​ရေး​တော်​​တော်​အကွက်​မြင်​တာပဲလို့ စိတ်​ထဲကချီးကျူးရင်း ပြန်​လာခဲ့တယ်​။
သူတို့သာ အ​ရောင်းအဝယ်​ဖြစ်​ပြီး ငွေအ​ပေးအယူလုပ်​​နေကြတာ ဘာစာချုပ်​မှမချုပ်​ကြဘူး။ ပိုင်​ရှင်​က​တော့ ဝယ်​သူကမချုပ်​လို့ သူလည်းမချုပ်​တာမို့ပြဿနာမရှိဘူး။ စိတ်​ထဲမှာ​တော့ တထင့်​ထင့်​နဲ့​ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ဒုတိယလမှာ ပြဿနာကစတက်​ပြီ သိန်း၁၀၀၀​ပေးရမယ့်​ရက်​မှာ ဝယ်​သူက်ို ဆက်​သွယ်​လို့မရဘူး။ ခြံရှင်​ကလည်း သူ့စီးပွား​ရေးလုပ်​ငန်းကို တိုးချဲ့​နေ​တော့ ​ငွေ​ပေးစရာရှိတာကို ချိန်းထားတာအဲဒီရက်​ဖြစ်​​နေလို့ အကြပ်​ရိုက်​ပြီး သူ့ကွန်​ဒိုကိုသွား​မေး၊
ကျွန်​​တော့်​အိမ်​ကိုခဏခဏလာနဲ့ ပြာယာခတ်​​နေတာပဲ။ တကယ်​​တော့ ကျွန်​​တော်​တို့က ပွဲခတပြားမှမယူထား​သေးပါဘူး။ နောက်​ပိုင်းစိတ်​ရှုပ်​စရာ​တွေ ဖြစ်​လာ​တော့တာပါပဲ။ ဝယ်​တဲ့သူကလည်​ ရခိုင်​မှာ အလုပ်​များ​နေလို့ဆိုပြီး ၃လပြည့်​မှ
ငွေအ​ကျေ​ချေမယ်​ဆိုတာ​ပြောလာ​တော့ စကား​တွေများလာကြတယ်​။ အ​ချေအတင်​နဲ့ အ​စေးမကပ်​ကြ​တော့ဘူး။ ပိုင်​ရှင်​က အညာသား၊ဝယ်​သူကရခိုင်​၊ အညာသားနဲ့ရခိုင်​ ဘု​ဘောက်​​တွေ စ​တွေ့ကြ​တော့တာပဲ။
ဒီလိုနဲ့အ​ရောင်းအဝယ်​လုပ်​မယ့်​ နေ့​ရောက်​လာတယ်​။ ကျွန်​​တော်​တို့လည်း စာချုပ်​စာတမ်း​တွေ ပြင်​ဆင်​ပြီး ခြံမှာသွား​စောင့်​​နေတယ်​ ။ဝယ်​သူ​ရော​ရောင်းသူပါ ခြံကိုမလာကြဘူး။ ည​နေ​လောက်​ကျမှ ဝယ်​သူက ငွေအပြည့်​နဲ့​ရောက်​လာ​ပေမယ့်​
ရောင်းသူက သူ​နေတဲ့အိမ်​ကိုလာခဲ့ပါ ဝယ်​သူကလည်း ခြံမှာပဲ​ငွေ​ချေမယ်​ဆိုပြီး တင်းခံ​နေကြရင်းနဲ့ ဖုန်း​တွေနဲ့အပြန်​အလှန်​စကားများကြ​တော့တာပဲ။
​နောက်​ဆုံး​တော့ ပိုင်​ရှင်​နဲ့ဝယ်​သူတို့ ရပ်​ကွက်​အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးရုံးမှာပဲ စကား​ပြောမယ်​ဆိုပြီး ချီတက်​ကြပါ​လေ​ရော။ နှစ်​ဖက်​လုံးက အုပ်​စုလိုက်​လာကြတာဆို​တော့ ရပ်​ကွက်​ရုံးကလည်း အလန့်​တကြား​တွေ ဖြစ်​ကုန်​ပြီး ​မေးမြန်းကာမှပဲအရှိန်​​တွေတက်​ပြီး
မင်းကဘယ်​​လောက်​ချမ်းသာလဲ ​တွေဖြစ်​ပြီးပါလာတဲ့​ငွေနဲ့ကား​တွေမီးရှို့မလားဆိုပြီး ဝယ်​သူဘက်​က​ပြောတယ်။ အ​ခြေအ​နေကတင်းမာလာပြီး ဝယ်​သူက သူ့တပည့်​​တွေကို ဓာတ်​ဆီပုံးကို်​င်​ပြီး ကား​ဘေးမှာအဆင်​သင့်​​စောင့်​​နေကြဆို​တော့ အကုန်​ရှုပ်​ကုန်​တဲ့အချိန်​
အ​ရောင်းအဝယ်​လည်းပျက်​ အ​ခြေအ​နေ​တွေကလည်း ရှုပ်​​ထွေးသွား​တော့ စိတ်​ပျက်​လက်​ပျက်​နဲ့ ကားနားအ​ရောက်​မှာ ဓာတ်​ဆီပုံးနဲ့​စောင့်​​နေတဲ့ သူ့တပည့်​​တွေ​တွေ့လို့ ဒီကားက ကျွန်​​တော့်​ကားပါဗျာလို့ ​တောင်းပန်​ရင်း ကား​မောင်းထွက်​လာပါ​တော့တယ်​။
ဒီလိုနဲ့ ဒီအဖြစ်​​တွေကို ​မေ့​မေ့​ပျောက်​​ပျောက်​နဲ့​နေလာရင်းတ​နေ့မှာ သတင်းထူး​တွေပါလာပါ​တော့တယ်​။ မူးယစ်​​ဆေးဝါး လိုက်​ဖြန့်​​နေတဲ့ကားတစ်​စီးကို ဖမ်းမိရင်း အဓိကပိုင်​ရှင်​ကို လိုက်​ရာက​နေ ​နောက်​ဆုံးစစ်​​တွေမှာ ဖမ်းမိခဲ့တယ်​ဆိုတဲ့
သတင်းက အံ့သြ​စေခဲ့ပါတယ်​။ ပိုင်​ဆိုင်​မှု​တွေစိစစ်​သိမ်းဆည်းလိုက်​တာ သိနိး​ပေါင်းသိန်းချီချမ်းသာ​နေတဲ့ ပိုင်​ရှင်​သည်​ကား တခြားလူမဟုတ်​….
အ​မှောင်​ထဲကိုတိုးဝင်​မိရင်း ​မှောင်​ကမ္ဘာထဲမှာ ကျင်​လည်​ရင်း အလင်း​ရောင်​ဆီကို ပြန်​မ​ရောက်​နိုင်​​တော့တဲ့ လူငယ်​လူ​တော်​​လေးတစ်​ဦးဟာ သူ့ဇနီး​ချောနဲ့အတူ ပြစ်​ဒဏ်​က​နေ လွတ်​​မြောက်​လာနိုင်​မယ့်​​နေ့ကို စောင့်​​မျှော်​ရင်း သူချစ်​တဲ့ သူ့သားငယ်​​လေးကို
ဘာမှမရှိ​တော့တဲ့ဘဝမှာ ထားခဲ့ရတဲ့အတွက်​​ကြောင့်​ နောင်​တ​တွေတ​ပွေ့တပိုက်​နဲ့ ခံစား​နေရမှာပါ။
သူ​ပြောခဲ့တဲ့စကား​လေးတစ်​ခွန်း​တော့ မှတ်​မိပါ​သေးတယ်​။”ကျွန်​​တော်​တို့ရခိုင်​​​ဒေသမှာ အရမ်းဆင်းရဲကြတယ်​ဗျာလူငယ်​​တွေ ပညာတတ်​​တွေလည်းမရှိကြ​တော့ဘူး ကျွန်​​တော်​​ကျောက်​ဖြူစီမံကိန်းမှာ အလုပ်​အကိုင်​​တွေရှာ​ပေးချင်​တယ်​ဗျာ
ဒါ​ကြောင့်​လည်း ကြိုးစား​နေတာပါ”ဆိုတဲ့ သူ့စိတ်​ရင်းကလာတဲ့စကားသံကို ပြန်​လည်​ကြား​ယောင်​မိရင်းတချိန်​က ကိုယ်​​တွေ့ဖြစ်​ရပ်​​လေးကို ပြန်​မျှ​ဝေလိုက်​ပါ​တော့တယ်​။
ကိုစိုင်း ​ငွေကြိုးကြာ 3.2.2019
0 Comments on "အလင်း​ပျောက်​​သော အ​မှောင်​ကလူ"